Nabani na oye wafunda isayensi esisiseko uyazi malunga ne-athomu: isiseko sakhiwo sokwakha njengoko siyazi. Sonke, kunye nomhlaba wethu, inkqubo yelanga, iinkwenkwezi kunye nemilalane, zenziwe ngee-athomu. Kodwa, ii-athomu ngokwabo zakhiwa kwiinqununu ezincinci ezibizwa ngokuthi "iincwadana ze-subatomic" -i-electrons, protons, ne-neutrons. Ukufundwa kwezi nxalenye ze-subatomic zibizwa ngokuthi "i-particle physics" ukufundisisa uhlobo kunye nokusebenzisana phakathi kwezi ntlukwano, ezenza umcimbi kunye nemitha.
Olunye lwezihloko zakutshanje uphando lwefilosofi "lugqithiso lwamaqondo" oluthi, njenge-stringory theory , lisebenzisa imizekelo yamacandelo omzimba omnye endaweni yeengqungquthela zokunceda ukuchaza izinto ezithile ezingaqondanga kakuhle. Inkolelo ithi ekuqaleni kwendalo xa i-particle edibeneyo isakhiwa, inani elinganayo elibizwa ngokuthi "superparticles" okanye "abaphambili" lenziwe ngexesha elinye. Nangona le ngcamango ingabonakali, i-physicists isebenzisa izixhobo ezinjenge-Large Hadron Collider ukufuna ezi zinto ziphezulu. Ukuba zikhona, zingaphinda ziphindwe kabini inani leziqwenga ezaziwa kwi-cosmos. Ukuze uqonde i-supersymmetry, kulungele ukuqala ngokujonga kwiindidi eziyaziwa kwaye ziqondwa kwindalo yonke.
Ukwahlula i-Subatomic Particles
Iintlobo ze-Subatomic azizona iinqununu ezincinci zomcimbi. Zenziwe ngamacandelo amancinci athiwa ngama-particle particles, ayenziwa ngokwawo ngamafizikiki ukuba abe nemihlali yee-field quantum.
Kwi-physics, amasimi yimihlaba apho indawo nganye okanye ingongoma ichaphazelwa yimandla, njengobuncwane okanye i-electromagnetism. "I-Quantum" ibhekisela kwisixa esincinci saso nasiphi na into ephathekayo echaphazelekayo ekusebenzisaneni namanye amashishini okanye abachaphazelekayo yimikhosi. Amandla e-electron kwi-athomu iqikelelwe.
I-particle ekhanyayo, ebizwa ngokuba yi-photon, iyinxalenye eyodwa yokukhanya. Intsimi ye-quantum mechanics okanye i-quantium physics yinjongo yeeyunithi kunye nendlela imithetho engokwenyama ifuthe ngayo. Okanye, cinga nje njengoluhlolisiso lwemimandla encinci kunye neeyunithi ezidibeneyo kunye nendlela abachaphazeleka ngayo amandla omzimba.
Iintlobo kunye neengcamango
Zonke iinqununu eziyaziwayo, kubandakanywa iincinci ze-atomic, kunye nokusebenzisana kwazo zichazwa yinkcazo ebizwa ngokuba yiMode Model . Unamaqhosha angama-61 angundoqo anokudibanisa nokwenza iifenethi ezidibeneyo. Akukabikho inkcazo epheleleyo yendalo, kodwa inika ngokwaneleyo ukuba ama-physicist particle azame ukuqonda kunye nemithetho ethile ebalulekileyo malunga nokuba umcimbi wenziwe njani, ingakumbi kwindalo yokuqala.
I-Model Model ichaza emithathu imithombo emine ebalulekileyo kwindalo yonke: amandla e-electromagnetic (ejongene nokusebenzisana phakathi kweengqungquthela ezixhasiweyo zombane), amandla abuthathaka (asebenzisana nokusebenzisana phakathi kweengqungquthela ze-subatomic ezibangelwa ukubola kwe-radioactive), kwaye amandla amakhulu (ephethe iindidi ndawonye kwimida emifutshane). Ayichazi amandla okukhusela . Njengoko kuchaziwe ngasentla, ichaza iindile ezingama-61 ezaziwa ngoku.
Amacandelo, amaQumrhu, kunye ne-Supersymmetry
Ukufundwa kweengqungquthela ezincinci kunye nemikhosi echaphazelayo nokuyilawula iholele ii-physicists kwingcamango ye-supersymmetry. Igcina ukuba zonke iindidi kwizinto zendalo zihlukaniswe ngamaqela amabini: ii- bosons (eziphantsi komgca we-gauge bosons kunye ne-bosal eyodwa ye-scalar) kunye ne- fermions (efumana i-quarks kunye ne-anti-marquons, i-leptons kunye ne-anti-leptons, kunye nezizukulwana zabo ezahlukeneyo) I-herons idibeneyo yee-quarks ezininzi. I-theory ye-supersymmetry posits yokuba kukho uxhulumaniso phakathi kwazo zonke iindidi zeengqungquthela kunye ne-subtypes. Ngoko, umzekelo, i-supersymmetry ithi i-fermion kufuneka ibe khona kuyo yonke i-boson, okanye, kwi-elektron nganye, Uphakamisa ukuba kukho umphathi omkhulu obizwa ngokuba yi "selectron" kunye nakwezinye izicwangciso.
I-Supersymmetry iyinkcazo enhle, kwaye xa ibonakaliswe ukuba yinyani, iya kuhamba ixesha elide ekuncedeni ama-physicist ngokucacileyo ukuba achaze iibhloko zokwakha kwimizekelo ye-Standard Model kwaye ivelise amandla. Okwangoku, nangona kunjalo, iincinci ze-superpartner azifumanekanga kwizilingo usebenzisa i- Large Hadron Collider . Oko akuthethi ukuba abakho, kodwa ukuba ababonwanga. Inokukunceda kwakhona ama-physicists ukuba athawule ubunzima be-subatomic particle: i-bosgs yase-Higgs (leyo ibonakalisa into ebizwa ngokuba yi-Higgs Field ). Le ngqungquthela enika yonke into ebunzima bayo, ngoko kubalulekile ukuyiqonda kakuhle.
Kutheni i-Supersymmetry ibalulekile?
Ingqiqo ye-supersymmetry, ngelixa ilukhuni kakhulu, yintliziyo yakhe, indlela yokucoca ngokujulile kwiinqununu ezibalulekileyo ezenza iphela. Nangona i-particle physicists zicinga ukuba zifumene iiyunithi ezisisiseko zezinto kwihlabathi le-atomic, zisengumgama omde ukusuka ekuziqondeni ngokupheleleyo. Ngoko ke, uphando malunga nohlobo lweengqungquthela ze-subatomic kunye nabasemagqabini abo abanokuthi baqhubeke.
I-Supersymmetry inokukunceda abancedisi be-physic zero kwiimeko zobumnyama . Kuyiyo (ede kakhulu) uhlobo olungabonakaliyo lwezinto ezinokuthi zifumaneke ngokungahambi ngqo ngempembelelo yalo yendalo. Iyakwazi ukusebenza ngokucacileyo ukuba iincinci ezifanayo zifunwa kwi-supersymmetry yophando zingabamba iqhosha kumbono omnyama.
Yintoni Ixesha? Inkcazo elula
Indlela Lever Work
Imfundo kaRhulumente yaseSpartan
Isikhokelo sokusebenzisa iikopi kwiimvavanyo
Pluto Capricorn: Ifa kunye neKamva